Eritreretina ny Mary – 2trondro
Home / Fiangonana / Mary / Eritreretina ny Mary
Maty ny Virgin amin'ny Duccio von Buoninsegna
Ny vinavina dia ny finoana fa Mary, Rehefa nifarana ny fiainany teto an-tany azy, nalaina vatana sy fanahy any an-danitra. Izany no voafaoka ao andinin-tsoratra masina ny Soratra Masina isan-karazany, angamba tena mazava tsara ao amin'ny Fanambarana 12, ary dia nino ny Kristianina voalohany, araka ny nambara tamin'ny litorzia sy ny asa soratra fahiny. Angamba ny porofo ara-tantara lehibe indrindra ao amin'ny kevitra, anefa, dia ny zava-misy fa tsy misy olona na ny fiaraha-monina dia mbola nilaza ho zara-taninareo Mary ny vatana.1 Afaka matoky iray izay nanana ny tenan'ny Mary, avy lavitra ny tena nanandratra ny Olomasina, mbola eto an-tany, ny mpanara-dia an'i Kristy dia efa mahafantatra tsara izany.
Tsy mitranga ho roa samy hafa finoana momba ny toerana Maria mandalo: iray manondro tany Jerosalema; ny anankiray kosa ho any Efesosy. Ao amin 'ny roa, ny fomban-drazana dia be taona teo aloha, ary tsara kokoa motivés. Mahaliana ampy, -poana, tamin'ny taonjato voalohany fasana hita nandritra ny fihadian-tany eo amin'ny toerana ny mandalo any Jerosalema tamin'ny 1972 (jereo Bellarmino Bagatti, Michael Piccirillo, ary Albert Prodomo, O.F.M., New Hita teo amin'ny Fasana Maria Virjiny tao Getsemane, Jerosalema: Franciscan milina fanontam-pirinty, 1975). Misy manam-pahaizana no nisalasala ny maha-azo itokiana ny fasana io satria tsy resahina ny tany am-boalohany ray izay nonina tany Palestina, toy ny Cyrille de Jérusalem (D. 386), Epiphanius (D. 403), ary Jerome (D. 420). Fa, toy ny archeologist Bellarmino Bagatti nanasongadina, Ny fasana Maria i ankapobeny sorohina ny Kristianina voalohany ny hafa firenena fiaviana satria nitsangana teo amin'ny fananan'ny Judeo-Kristianina, izay “Noheverina schismatics raha tsy mpivadi-pinoana” (Ibid., t. 15). Fa izany antony, toerana masina hafa, toy ny an-trano ambony, Tsy hita ao am-boalohany na asa soratra (Ibid.). Dia tokony ho tsaroana koa fa ny tafika romanina ny Jeneraly Titus ho simban'ny Jerosalema tamin'ny taona 70, manafina toerana masina ny Jodaisma sy ny Kristianisma ambany ny korontan-trano rava. In 135, ny Mpanjaka Hadrien rava tanteraka ny tanàna indray amin'ny tanjona mazava ny fanorenana an-tampon'ny tempoly mpanompo sampy ny sisa tavela amin'ny toerana masina. Ny toerana Maria ny mandalo sy ny toerana masina hafa mbola very hatramin'ny taonjato fahefatra, fara fahakeliny, ny Emperora Constantin rehefa Lehibe tsikelikely nanomboka indray ny Fivavahana Kristianina ny toerana masina, manomboka amin'ny Fasana Masina in 336.] Ny vinavina dia manome ohatra ny mpianatr'i Kristy manaraka ireto rehefa Azy tao am-batana fitsanganana amin'ny maty, nanondro ny zava-misy marina ho an'ny Kristianina rehetra manantena izay. amin'ny farany, Mijoro ho vavolombelona fa tsy ho azy ny fahamasinana, koa, fa ho amin'ny fahamasinana 'i Jesoa, amin'ny hoe ny kaonty dia nahazo prerogatives manokana.
Raha izany foana no nino ny Kristianina, ny fiheverana nambara tamin'ny fomba ofisialy ny teny finoana momba ny Eglizy Katolika amin'ny alalan'ny Papa Pie XII in 1950. Azo antoka fa misy afaka mahita ny fitiavana fahendrena amin'ny fanamafisana ny ara-batana Maria fitsanganana amin'ny maty ho an'izao tontolo izao amin'ny midpoint ny taonjato iray izay nanatri-maso be dia be ny tsy rariny lehibe manohitra ny fahamendrehan'ny olona ny olombelona. Tamin'ny fotoana ny fanambarana ny foto-pinoana, izao tontolo izao dia vao misondrotra avy ny horohoro ny ho faty ny Nazia sy toby manakaiky haingana ny fanjakana-voaro famonoana ny zaza. Ny ambony ny vehivavy sy ny lehiben'ny fiantsoana ny reny no tena nisy herisetra ny fiaraha-monina maoderina, izay nifantoka inordinately hamely ny hatsaran-tarehy ivelany, ary nitady ve mba hampihena azy ho zavatra ny fitsiriritana. Nifanohitra tanteraka ireo fanambarana ny ny kolontsaina ny fahafatesana, Mary ny fiheverana hoy fahamendrehana amin'ny vehivavy sy ny vatan'olombelona, ny olombelona, amin'ny fomba mahery vaika.
Niakarany ny Virgin amin'ny Albrecht-toaka
Ny teny finoana momba ny fiheverana mitoetra eo amin'ny Fiangonana ny fahefana hamahana ny ondrin'i Kristy (cf. John 21:15-17; Luke 10:16) ary ny Mpamonjy fampanantenana izay ny Fiangonany no hampianatra ny fahamarinana (cf. John 14:26; 16:13; Matt. 16:18-19; 1 Tim. 3:15). Io foana ny fahefana mety diso no natoky hilazana ny tena fampianarana, rehefa ady no nitsangana teo anivon 'ny mahatoky. Hitantsika izany ao amin'ny antso ao amin'ny Filan-kevitry Jerosalema (Asan'ny Apostoly 15); in Paoly fitadiavana ny Apôstôly’ fankatoavana ny fitoriana maro taona taorian'ny ny fiovam-pony (Gal. 2:1-2); ary ao ny fihetsika ny farany Kônsily ekiomenika, izay nanambara ny maha-Andriamanitra an'i Kristy ao amin'ny 325, ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina ao amin'ny 381, ary Maria masina fiterahana in 431.
foto-kevitra teolojika, ny fiheverana Mifandray akaiky amin'ny Immaculate fotoana nampitsaika, izay milaza fa Maria, amin'ny alalan'ny fahasoavana manokana avy amin 'Andriamanitra, dia voatsimbina avy ny tasy ny ota tany am-boalohany hatramin'ny fotoana voalohany azy misy. Ny fahafahana amin'ny ota dia tanteraka ao ny fampanantenan'Andriamanitra eo amin'ny fahalavoan 'ny olona mba hametraka hifandrafy ny devoly sy ny Renin'ny Mpanavotra (Gen. 3:15). Miverina amin'ny andron'ny apostoly, ny Fiangonana no nanaja Maria toy ny New Eva, mahatoky mpanampy sahaza ny New Adama. Toy Eva voalohany nino ny lainga 'i Satana, ny anjely, ary nanda ny drafitr'Andriamanitra dia nitondra ota sy fahafatesana ho amin'izao tontolo izao; toy izany koa ny New Eva nino ny fahamarinana ao amin'ny Gabriel, ny Arkanjely, ary miara-miasa amin'ny drafitry ny famonjena sy ny fiainana nitondra ho amin'izao tontolo izao. Amin'ny mandinika Maria toy ny New Eva, koa, dia tonga saina fa orchestrating ny fanavotana, Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga nofoanana ara-bakiteny ny zava-nitranga ny fahalavoana. am-boalohany, ohatra, Adama tonga taloha; sy Eva dia namorona avy amin'ny nofony. Ao amin'ny fanavotana, Mary, ny New Eva, tonga taloha; ary i Kristy, ny New Adam, Niforona avy ny nofony. toa fifanandrifian-javatra, izany no antony ao amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao ny vehivavy sy ny lehilahy dia ny reniny sy ny zanany lahy, tsy mpivady tahaka an'i Adama sy Eva efa.
Fa Maria nahazo Eva ny tsy nanan-tsiny teo anoloan'ny fahalavoana izy dia azo inoana fa midika afa-miala avy amin'ny sazy: asa fanaintainana sy ny fahafatesana ara-batana (cf. Gen. 3:16, 19; Rom. 6:23). Na dia tsy tsiny avy ireo zavatra ireo tanteraka, na izany aza, dia mety, fara fahakeliny, izay niavaka fahasoavana nomena azy raha miteraka sy ao amin'ny fahafatesana.2
Corontion ny Virgin amin'ny hafa firenena da Fabriano
Toy ny fiposahan'ny ny fatin'ny olona masina araka ny Fanomboana (cf. Matt. 27:52), ny fiheverana dia mpialoha làlana ho amin'ny ara-batana fitsanganan'ny mpino amin'ny Andro Fitsarana, rehefa ho “dia nakarina … eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka” (1 Tes. 4:17).3 Ny Baiboly dia tsy manohitra ny foto-kevitra momba ny vatana vinavina any an-danitra. ao amin'ny Soratra Masina, I Enoka sy Elia dia nakarina any an-danitra ara-batana (cf. Gen. 5:24; 2 Mp. 2:11; Asaivo. 11:5). Marina fa ny Baiboly milaza tsy mivantana fa Maria no noheveriny. Kanefa tahaka izany ihany koa famantarana, ny Baiboly dia tsy mandà na manohitra ny vinavina.4 Koa, raha mivantana noho ny fiheverana fa tsy hita ao amin'ny Soratra Masina, dia mety ho inferred amin'ny andinin-teny sasany momba ny Fiaran'ny Fanekena, ny karazana Mary. Ny Vata no nanaovana ny tsy mety lo hazo sy nopetahany takela-bolamena tsara noho ny fahamasinana ny zavatra dia natao hitondra toy izany koa (cf. Taloha. 25:10-11); toy izany koa ny Virjiny dia nomena fahadiovana ara-panahy sy ara-batana ary tsi-fahafatesana amin'ny fanomanana ny nitondra ny Zanak'Andriamanitra. Fa Maria incorrupt vatana, ny Vata Fanekem-pihavanana Vaovao, ho any An-danitra dia hita ao amin'ny Salamo 132:8, izay milaza, “Mitsangàna, Tompo O, ka mankanesa any amin'ny fitsaharanao, ianao sy ny fiaran'ny herinao.” Fa ny Fanekem-pihavanana Taloha-Vata amin'ny fomba mistery nanjavona Rehefa nandeha ny fotoana eo amin'ny tantara dia mampiseho ny Lady ny vinavina ihany koa.5 Ny fanaka masina nijanona miafina nandritra ny taonjato maro mandra-pahatongan'ny Apôstôly Jaona nahazo ny topimaso izany any an-danitra, araka izay mamaritra in Fanambarana: “Ary ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra novohana, ary ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny hita … . Ary nisy fambara niseho tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary amin'ny lohany misy satro-boninahitra kintana roa ambin'ny folo” (11:19, 12:1). Ny fahitan'i Jaona ny Renin'ny Mpanavotra mitoetra ao amin'ny Paradisa ara-batana no akaiky indrindra zavatra ananantsika ho vavolombelona nahita maso noho ny fiheverana. Dia mandeha ny fanazavany fa efa nakarina any an-danitra ny Tompo taorian'ny Fiakarana. “ny zanany,” dia hoy, “novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany, Ary ravehivavy kosa nandositra nankany an-efitra, izay izy no nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, izay mba ho mivelona iray arivo sy enim-polo amby roan-jato andro” (12:5-6). Toy izany koa, hoy izy, “Ilay vehivavy nomena ny elatra roa an'ny voromahery lehibe hanidinany avy ny menarana tany an-efitra, ho any amin'ny toerana izay izy dia tsy maintsy mivelona mandritra ny fotoana, sy ny fotoana, ary antsasaky ny fotoana” (12:14).6
Ny soratra voalohany maintsy harahina eo amin'ny fiheverana dia isan-karazany sy ny pseudoepigraphical soratra apokrifa, izay latsaka eo ambanin'ny lohateny ankapobeny ny andalan-teny Maria Virjiny na Nandalo Maria. Ny tranainy indrindra ireo, nino ny efa ahitana nandritra ny taonjato faharoa amin'ny Leucius Karinus, mpianatr'i Jaona, dia heverina ho miorina eo amin'ny tany am-boalohany antontan-taratasy avy amin'ny vanim-potoana maha-apôstôly, izay tsy maintsy harahina.7
Ny finoana tany am-boalohany ny Fiangonana ny Virjiny dia incorrupt amin'ny vatana sy fanahy tanteraka manohana ny fiheverana. ny tsy fantatra anarana Taratasy ho Diognetus (cf. 125), ohatra, milaza azy ho Virgin izay tsy ho voafitaka.8 Raha ny tena izy, mpanoratra fahiny maro, indrindra indrindra Olomasina Justin Maritiora (D. toy ny. 165) ary Irénée de Lyon (D. toy ny. 202), mampifanohitra Mary in ny tsy fivadihana tamin'i Eva tao amin'ny mpanota. Saint Hippolyte ny Roma (D. 235), ny mpianatra ny Ireneaus, Mary nampitaha ny nofo araka ny “tsy mety lo hazo” ny Vata (Fanehoan-kevitra ao amin'ny Salamo 22). The eo ambanin 'ny vavaka, ahitana in momba ny tapaky ny taonjato fahatelo, miantso Mary “irery ihany no madio sy irery nitso-drano.”
Ao amin'ny Saint Efraima ny Syriana ny Fihirana ny nahaterahan'i Jesosy, avy any amin'ny tapaky ny taonjato fahefatra, fampiasana fanehoana an-tsary izay mampahatsiahy Fanambarana 12:4, Mary toa manambara mialoha ny pitaterana ny vatany any an-danitra, nanao hoe:, “Ny Zazakely izay mitondra efa nitondra ahy … . Dia niondrika ny volon'elany dia nalainy izy ka nanao ahy eo ny elany, ary nanidina faingana ho amin'ny rivotra” (17:1). In 377, Saint Epiphanius ny Salamisy nanoratra, “Ahoana no dia masina i Maria tsy handova ny fanjakan 'ny lanitra sy ny nofony, satria izy tsy unchaste, na tsy voafehy, sady tsy izy ve manitsakitsa-bady, ary satria izy tsy nanao na inona na inona ratsy hatrany ny asa araka ny nofo dia miahiahy, fa mbola Stainless?” (Panarion 42:12). Misy milaza fa tsy ho nino ny fiheverana satria izy miteny eto Maria ny fidirana any an-danitra ara-batana amin'ny hoavy henjana. Nefa hoy ny fanamarihany tatỳ aoriana ao amin'ny rakitra iasana ihany, “Raha novonoina, … Avy eo dia nahazo voninahitra miaraka amin'ny maritiora, sy ny vatany … mitoetra eo amin'ireo izay mankafy ny fialan-tsasatra ny fitahiana” (Ibid. 78:23; nampiana fanamafisana). Manombantombana ny nahafatesany, dia tamin'i fa na
dia maty na tsy maty, … naleviny tao, na dia tsy nalevina. … Soratra Masina fotsiny no mangina, noho ny halehiben 'ny prodigy, mba tsy hamely ny sain'ny olona amin'ny tafahoatra mahagaga. …
Raha ny Virjiny masina dia maty sy efa nalevina, Azo antoka fa ny fanapahana nitranga tamin'ny voninahitra lehibe; ny farany dia tena madio sy satroboninahitra ny virginit. …
Na dia mbola velona. Fa, ho an'Andriamanitra, dia tsy azo atao ny manao izay rehetra tiany; etsy ankilany, tsy misy mahalala tsara izay ny farany dia (Ibid. 78:11, 23).
Fa Epiphanius tsy nahalala ny tsipiriany Maria ny mandalo dia tanteraka takarina–Ny Kristianina mbola tsy mahalala ny antsipiriany izany, ary izany dia mety ny Apôstôly ny tenany tsy nahalala na, Fa ny vatany nalaina avy ao anatin'ny iray fonosina fasana.9 Tsy toy ny tany am-boalohany hafa mpanoratra, na izany aza, Epiphanius nisoroka namorona ny tsipiriany ho an'ny tenany. Na dia tsy fantany tsara izay efa natao, fantany, amin'ny fahazavan'ny Maria tonga lafatra masina, fa ny mandalo maintsy efa mahagaga–zavatra izay te “hamely ny sain'ny olona amin'ny tafahoatra mahagaga”–ary izy tsy afaka ho nitoetra tao am-pasana. “Ao amin'ny Apokalypsy Jaona,” nanamarika ihany koa izy, “Hitantsika fa ny dragona natsipiny ny tenany tamin-dravehivavy, izay efa niteraka ny zazalahy; fa ny elatry ny voromahery dia nomena ny vehivavy, ary nanidina any an-efitra, izay ny dragona tsy hahatratra azy. Izany saika ho eo Mary ny raharaha (Rev. 12:13-14)” (Ibid. 78:11).
Teo am-piandohan'ny taonjato fahadimy, na teo aloha, ny andro firavoravoana amin'ny fankalazana Mary–izany hoe, ny fahatsiarovana azy mandalo–dia nampiditra an-Eastern litorzia, mametraka izany teo anivon 'ny tranainy indrindra ao amin'ny Fiangonana ny andro firavoravoana ofisialy.10 Around ny taona 400, Chrysippus Jerosalema naneho hevitra tao amin'ny Salamo 132, “Ny tena mpanjaka Vata, sarobidy indrindra Fiara, dia ny mandrakizay-Virjiny Theotokos; ny Vata, izay nandray ny harena rehetra fanamasinana” (Ao amin'ny Salamo 131(132)).
Ortodoksa mpanoratra avy izao ny fe-potoana ihany, miasa eo ambany penina anarana de Saint Méliton avy any Sardisy, ny akaiky-niara-belona tamin'i Leucius, tsiny azy noho ny manana “nanimba ny soratra tranainy indrindra amin'ny alalan'ny famelabelarana ny hevitra manokana izay tsy manaiky ny fampianaran'ny apostoly” (Bagatti, et al., t. 11). Io mpanoratra niezaka ny hamerina ny tena noho ny fiheverana, izay voalaza Leucius nanana “ratsy amin'ny ratsy penina” (Ny fizarana ny Virjiny Masina, Sasin-teny).
In about 437, Saint Quodvultdeus iza ny vehivavy ao amin'ny Fanambarana 12 tahaka ny Virjiny, manamarika, “Aoka tsy hisy aminareo tsy miraharaha (ny zava-misy) fa ny dragona (ao amin'ny Apokalypsy ny apostoly Jaona) dia ny devoly; fantatrareo fa ny virjiny dia midika Mary, ny madio iray, niteraka ny madio loha” (fahatelo toriteny 3:5).
Ao ny antenatenan'ny taonjato fahadimy, Saint Hesychius Jerosalema nanoratra, “Ny Vata ny fanamasinana, ny Virjiny theotokos tokoa. Raha Hianao no perla izy dia tsy maintsy ho ny Vata” (Toriteny tao amin'ny Masina Maria, Renin'Andriamanitra). Around 530, Oecumenius hoy ny Fanambarana 12, “Marina no fahitana mampiseho azy any an-danitra fa tsy etỳ an-tany, toy ny madio amin'ny fanahy sy ny tena” (Fanazavana ny Apocalpyse). Nanoratra ny fiheverana akaikin'ny faran'ny taonjato fahenina, Saint Gregory ny Tours (Tsy toy ny Epiphanius) tsy tsy ny mpitranga eo tsipiriany ny niampita Tantara. “Ary indro,” Hoy i Gregory, “indray ny Tompo nitsangana teo amin'ny (ny Apôstôly); ny vatana masina (Maria) rehefa nandray, Izy no nandidy fa voafandriky ny rahona ho paradisa” (Boky miisa valo ao Fahagagana 1:4).
Mpanao tsikera ao amin'ny Fiangonana ny fampianarana Maria no nanao ny ankamaroan 'ny zava-misy fa ny voalohany-fantatra ny kaonty ny fiheverana dia hita ao amin'ny asa soratra apokrifa, ary ny Rain'ny Eglizy dia tsy miresaka momba izany eo anoloan'ny tara-taonjato fahefatra.
Fanao ihany koa izany, na izany aza, fa ny raim-pianakaviana tsy mijery ny hanitsiana finoana amin'ny fiheverana; izy ireo nangina fotsiny momba izany–fihetsika iray mbola tsy nisy toy raha dia pinoana nahazatra fampianarana, indrindra nomena ny tahan'ny teo ny mpino. Tsy inoana, tokoa, fa ny foto-kevitra momba ny vinavina Mary, izay manohana ny fahamasinan'ny ny vatan'olombelona, afaka niandohan'ny teo amin'ny sekta, nomena mba nanameloka ny vatana sy ny zava-drehetra ara-batana. The Apokrifa, raha ny tena izy, Matetika dia tsy ny asa ny mpivadi-pinoana, fa ny Kristianina Ortodoksa mikatsaka ny hametraka tsipiriany amin'ny tena zava-nitranga avy amin'ny fiainan'ny Kristy sy ny Olomasina izay raha tsy izany mifono zava-miafina. Raha apocryphists nitarina ny tantaran'ny ny fiheverana, tsy mamorona azy. Ny zava-misy fa ny niampita nisy saika na aiza na aiza ao amin'ny tontolo kristianina, niseho amin'ny fiteny maro, anisan'izany ny teny hebreo, Grika, Latina, Coptic, Syriac, Ethiopic, sy Arabo, manaporofo ny tantaran'i Maria ny fiheverana dia niely eran tany amin'ny taonjato voalohany sy ny, noho izany, ny apostoly fiaviana.
Raha ny Fiangonana mbola nisy Fantany ny loza tafiditra amin'ny fianteherana amin'ny asa ny am-boalohany toetra, dia tsy azo lavina fa voany ny fahamarinana hanjaka amin'ny maro toy izany asa. Tadidio, ohatra, fa Saint Jude milaza ny Vinavina 'i Mosesy ary voalohany i Enoka ao amin'ny New Testament taratasy (jereo Joda 1:9, 14 FF.). Origin amim-pahendrena nandinika:
Isika tsy mahalala fa maro ireo zava-miafina ireo asa soratra vokarin'ny olona, malaza noho ny helony. … Koa tsy maintsy manaiky mampiasa mitandrina amin'ny asa soratra rehetra izany zava-miafina izay mivezivezy eo ambany ny anaran'ny olona masina … satria ny sasany tamin'izy ireo dia nosoratana mba handringana ny marina ny Soratra Masina sy ny hametraka ny fampianaran-diso. Etsy ankilany, tokony tsy mandà tanteraka izay mety ho asa soratra ilaina eo amin'ny fandatsahan fanazavana momba ny Soratra Masina. Ho famantarana ny lehibe ny mihaino sy hanatanteraka ny torohevitry ny Soratra Masina: “Test ny zavatra rehetra; hitana izay tsara” (1 Tes. 5:21) (Fanehoan-kevitra ao amin'ny Matio 28).
In 494, Pope Saint Gelasius, mikatsaka ny hiaro ny mpino manohitra ny mety manimba fitarihana ny asa soratr'i ara-pivavahana maro mampiahiahy-mpamorona izay namely ny Kristianina izao tontolo izao, Navoaka ny lisitry ny boky kanônika nosarihana niakatra noho ny teo alohany, Pope Saint Damasus, miaraka amin'ny lisitra lava be ny azo ekena sy tsy azo ekena ara-baiboly fanampiny-boky.
Mpanohitra ny Fiangonana no nanao ny adihevitra momba ny ny zava-misy fa ny apokrifa soratra teo amin'ny fiheverana no tafiditra eo amin'ny boky voarara tao Gelasius’ decre, fa ny Papa nanameloka ny apokrifa noho ny fiheverana, mazava ho azy, fa tsy ny fiheverana mihitsy.
Apokrifa tantara ny hafa finoana dia toy izany koa Ortodoksa voaheloka ao amin'ny didim-panjakana–ny Protoevangelium Jakoba, ohatra, miresaka momba ny nahaterahan'i Jesosy; ary ny Asan'ny Peter efaha amin'ny asa misionera i Petera sy ny maritiora tany Roma. Na dia bebe kokoa ny hevitra, ny asa soratr'i Tertullien dia voarara, na ny asa sorany, ohatra, fotsiny mitondra ny lohateny hoe Batisa ary fibebahana, miaro ny ortodoksa toerana eo amin'ny foto-kevitra ireo. ve Gelasius’ fanamelohana ny boky ireo hahatratra ny fandavana ny Batemy sy ny fibebahana, avy eo, na no tsy maintsy manao zavatra bebe kokoa amin'ny fanontaniana ny Tertullien ny toetra amam-panahy?
Mazava, ny fandrarana ny boky ao amin'ny Gelasian Didim-panjakana tsy hoe mba ho ambongadiny fandavana ny foto-kevitra ny boky ny zavatra, na Hevitra ato Anatiny. Matetika, manam-pahaizana kokoa ho takian'ny ny Fiangonana mba hanavahana ny tena manimba zavatra avy amin'ireo boky. Nandritra izay fotoana izay, mametraka azy ireo eo ambany ny fandrarana dia manan-tsaina, ny tsy fahazoana antoka nomena manodidina azy ireo.11
Ho an'ireo mitady ho hita ao amin'ny Gelasian Didim-panjakana misy marimaritra iraisana ny Papa tsy fetezana ho diso, dia tokony ho nanazava fa ny fandraràna ny boky iray tsy misy ifandraisany amin'ny tsy fetezana ho diso ny Papa izany fotsiny satria ny famaizana hetsika, tsy ifandraisany amin'ny famaritana ny foto-pinoana. By zavaboary, ny famaizana hetsika dia iharan'ny fiovana. Ary mijoro eo amin'ny toerana ihany raha mbola ao ihany ny fandrahonana nahalala misy; indray mandeha ny fandrahonana efa lasa, ny sivana dia miavonavona. Amin'izay tranga manokana, tahaka ny kanônan'ny Baiboly nitombo tamin'ny fanekena ny fandrahonana nametraka ny Apokrifa vitsy sisa sy ny fandrarana lasa lany andro.
Izany no porofo tena miavaka ny Fivavahana Kristianina nomena ny penchant ho an'ny fiarovana sy ny fanajam-drehetra mifandray saintly–ny fomba fanao izay daty niverina tany am-piandohan'ny ny finoana ho toy ny Maritiora ny Saint Polycarpe, ahitana eo afovoan'ny taonjato faharoa, mampiseho. ↩
Raha Katolika dia nino fomban-drazana Mary nisy tsy nampandrenesiny amin'ny asa fanaintainana, izany dia efa nihevitra fa izy tokoa miaritra ny fahafatesana mba tanteraka mifanaraka amin'ny Zanany, izay na dia tsy mpanota nekena ny fahafatesana (cf. Phil. 2:5 FF.). Amin'ny famaritana ny teny finoana momba ilay kevitra, Pie XII nisoroka ny sasany nanao hoe: efa maty, nilaza fotsiny izy nanana “Mazava ho azy fa vita ny fiainany teto an-tany ny azy” (Munificentissimus Deus 44). ↩
The Katesizin'ny Fiangonana Katôlika mampianatra, “Ny vinavina ny Virjiny sambatra no endrika fandraisana anjara ao amin'ny Zanany ny Fitsanganana amin'ny maty sy ny fitsanganana amin'ny maty mialoha ny Kristianina hafa … . Izy efa anjara amin'ny voninahitry ny Zanany ny Fitsanganan-ko velona, niandry ny fitsanganana amin'ny maty rehetra mpikambana ao amin'ny Vatana” (966, 974). ↩
Misy zava-mitranga manan-danja hafa eo amin'ny fiainan'ny Fiangonana apôstôlika izay ny dia tsy lazaina avy ao amin'ny Testamenta Vaovao ihany koa, toy ny martyrdoms Petera sy Paoly, sy ny nandravana an'i Jerosalema ny tafika romanina tamin'ny taona 70. Araka ny sombin-taratasin'i Muratori, nanoratra tany Roma any amin'ny faramparan'ny taonjato faharoa, Lioka ihany no tafiditra ao amin'ny Asan'ny Apostoly zava-nitranga dia nanatri-maso ny maso. Fa Lioka nisoroka fanoratana ny zavatra izay tsy hita raha ny marina dia manampy antsika hahatakatra ny antony ny tsy voarakitra kevitra, fa nitranga ao am-pasana. Tsy toa ny Tompo fiakarany, hetsika ho an'ny daholobe hitan'ny maro, ny tsy nanan-kevitra vavolombelona. ↩
Faharoa Makabeo 2:5 milaza fa voaisy tombo-kase ny Vata Jeremia tao amin'ny lavaka tany amin'ny Tendrombohitra Nebo talohan'ny fanafihan'ny Babylonianina an'i Jerosalema tamin'ny 587 b.c. (cf. 2 Mp. 24:13, et al.). ↩
Protestanta mitady hijery ity vehivavy ity ho toy ny an'ohatra na isa ny Israely, na ny Fiangonana (cf. Gen. 37:9). Fivavahana Katolika mandray ireo fanazavana, fa dia mivelatra azy ireo mba hampiditra amin'ny fomba manokana Mary, ny hita vatana ny vahoakan 'Andriamanitra. Isiraely niteraka an'i Kristy, toy ny hoe; Maria niteraka an'i ara-bakiteny. Ao amin'ny fanehoan-kevitra momba io andalana io, Saint Quodvultdeus (D. 453), ny Eveka ny Carthage sy mpianatr'i Saint Augustine, nanoratra fa Mary “koa ao ambadik'io hafatra ny tenany ho olo-malaza ao amin'ny fiangonana masina: izany hoe, Ahoana raha nitondra zazalahy, dia nijanona ho virjiny, ka ny fiangonana nandritra ny fotoana mitondra ny mpikambana, nefa izy no tsy ho very ny virjiny” (Toriteny fahatelo amin'ny Semboly 3:6; jereo koa ny Clément avy any Aleksandria, Mpampianatra ny ankizy 1:6:42:1).
Ny motif ny vahoakan'Andriamanitra mandositra “ny elatry ny voromahery” ho fialofana dia hita manerana ny Testamenta Taloha (jereo Taloha. 19:4; Sal. 54 (55):6-7; Isa. 40:31, et al.). Ny teny fikasana ny “afa-mandositra any an-efitra” dia lalina tanteraka ao an-kevitra, Mary ho ny lehibe indrindra solontenan'ny ny vahoakany.
Ny an'ohatra andinin-tsoratra masina ao amin'ny Fanambarana 12 ny faharetan'ny fotoana, “arivo sy enim-polo amby roan-jato andro” ary “mandritra ny fotoana kelikely, sy ny fotoana, ary antsasaky ny fotoana” (6, 14), dia mety maneho ny vanim-potoana ny fanenjehana, izay ny Fiangonana dia haharitra, mialoha ny Fiavian'i Kristy Fanindroany.
Verse 12:17 hoy ny devoly, Tezitra ny vehivavy ny afa-mandositra, teo avy “mba hiady amin'ny sisa ny taranany, ho an'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manome momba an'i Jesosy.” Fa ny mpanara-dia an'i Kristy dia raisina “ny sisa ny taranany” manohana ny Fiangonana manaja Maria Renin'Andriamanitra ny Kristianina rehetra (cf. Isa. 66:8; John 19:26-27). ↩
Raha indray mandeha ny niampita dia heverina ho niandohan'ny tsy aloha kokoa noho ny tamin'ny taonjato fahefatra, sasany teolojia teny ampiasaina ao Leucius’ antontan-taratasy manamafy ny fiandohana na eo amin'izay ho tamin'ny taonjato faharoa na fahatelo (Bagatti, et al., t. 14; Bagatti hanovozan-kevitra ny asa, S. Peter in “Dormitio mariae,” p. 42-48; Fikarohana momba ny fomba amam-panao maty ny Virjiny, p. 185-214). ↩
Mivaky toy izao ilay tena lahatsoratra: “Raha toa ka mitondra ny hazo ny (fahalalana) sy hanongotra ny vokatra, ianao dia ho foana mivory ao amin'ny zavatra izay faniry eo imason 'Andriamanitra, zavatra izay tsy afaka ny menarana hikasika sy ny fitaka dia tsy mahaloto. Ary Eva dia tsy voafitaka, fa virijina hita mendri-pitokisana” (Taratasy ho Diognetus 12:7-9). Momba io andalan-teny, Cyril C. Richardson hevitra, “Izany dia somary mazava tsara fa ny mpanoratra mikasa milaza ny mifanohitra Patristic iombonana … eo Eva, ny reny tsy nankatò ny fahafatesana, ary Mary, ny mankatò reny ny fiainana, izay tranga ny parthenos ny soratra no ho Virjiny Mary” (Raim-pianakaviana kristianina tany am-boalohany, New York: Collier Books, 1970, t. 224, N. 23). Hilda Graef eken'ny, nanao hoe:, “Tsy toy ny efa ho Toa Maria dia nantsoina hoe Eva tsy misy intsony fanazavana” (Mary: A History of Fotopampianarana sy Devotion, Vol. 1, New York: Sheed sy Ward, 1963, t. 38). ↩
Mifanohitra amin 'ireo niampita kaonty, izay milaza ny Apôstôly nanatri-maso ny vatana Maria rehefa nentina any an-danitra, misy fomban-drazana izay maty izy tamin'ny Janoary 18 (Tobi 21), fa ny fasana foana tsy hita mandra- 206 andro taty aoriana tamin'ny Aogositra 15 (Mesore 16) (jereo Graef, Mary, Vol. 1, t. 134, N. 1; hanovozan-kevitra ny mpanoratra Dom Capelle, Gazety Theologicae Lovanienses 3, 1926, t. 38; M R. James, Ny apokrifa New Testament, 1924, p. 194-201). ↩
Ny andro firavoravoana amin'ny nahaterahan'i Jesosy (i.e., Krismasy) dia naorina teo am-piandohan'ny taonjato fahefatra, nandritra ny fotoana nanjakan'i Constantin. Ny andro firavoravoana amin'ny Ascension niorina tamin'ny taonjato fahadimy, rehefa tany am-boalohany no tafiditra tao amin'ny andro firavoravoana Pentekosta. ↩
Amin'izao fomba izao, ny Fiangonana mitovy ny reny izay mandrara ny zanany mba hijery manokana seho mandra-TV efa nanana ny fahafahana hijery ny fampisehoana ka tsarao ny ao anatiny ho an'ny tenany. Ny Fiangonana dia diso foana eo amin'ny lafiny mitandrina amin'ny raharaha-tsaina amin'ny finoana sy ny fitondran-tena. Diniho izay, Vao haingana, Olomasina Teresa ny Avila (D. 1582) sy Jaona ao amin'ny Cross (D. 1591), ankehitriny nohajain'ny ho mpampianatry ny Fiangonana, dia nalaina am-bavany ny Fitsarana Katolika eo amin'ny ahiahy ny fivadiham-pinoana. Toy izany koa, ny diary ny Saint Faustina Kowalska (D. 1938), Famindram-po avy amin'Andriamanitra in My Soul, dia nisy fotoana nolavin'ny ho heterodox ny Fiangonana teolojiana, fa tatỳ aoriana dia nahazo fankatoavana ofisialy eo ambany Papa John Paul Lehibe. Faustina ny fanambarana hita ao amin'ny diary, raha ny tena izy, no nitarika ny fanorenana ny andro firavoravoana amin'ny famindram-pon'Andriamanitra, Nankalaza ny rehetra ankehitriny ao amin'ny Fiangonana. ↩